လူမှုရေးအစီအမံများ - ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင်အဆုံးမသတ်နိုင်ပါ။
လက်ဆောင်များနှင့်ဘောက်ချာများအတွက်လူမှုရေးကင်းလွတ်ခွင့်မျက်နှာကြက်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ယူရို ၃၄၃ သို့ရောက်ရှိရန်ပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလကနှစ်ဆတိုးခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများအတွက်လက်ဆောင်များနှင့်ဘောက်ချာများ - ၂၀၂၀ ကင်းလွတ်ခွင့်မျက်နှာကျက် - နှစ်ဆ) ကိုကြည့်ပါ။
Normalement, ces cadeaux et bons d’achat devaient nécessairement être attribués au plus tard le 31 décembre 2020 pour bénéficier du nouveau plafond. Mais compte-tenu de l’annonce tardive de cette mesure, l’URSSAFaannoncé qu’elle appliquerait le nouveau plafond pour les attributions de chèques-cadeaux et bons d’achat au titre de 2020 qui auront eu lieu jusqu’au 31 janvier 2021.
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်ပတ်နေသည့် ၀ န်ထမ်းများအတွက်အားလပ်ရက်နှင့်အနားယူရာနေ့များကိုငွေရှာခြင်းသည်လည်းဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ရပ်ဆိုင်းသွားမည်ဖြစ်သည် (ဆောင်းပါး“ လစာနှင့်အနားယူရာနေ့များကိုငွေရှာခြင်း” ကိုကြည့်ပါ) သို့သော်ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေတိုးချဲ့မှုကိုခွင့်ပြုသည့်ဥပဒေသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇွန်လ ၃၀ အထိဤယန္တရားကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
DIF အရရရှိသောနာရီများဆုံးရှုံးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများသည်သူတို့အသုံးမပြုသောအရာများကို၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်ရေးအကောင့်သို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်နောက်ဆုံးနေ့ ...
လူမှုရေးအစီအမံများ - ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင်အဆုံးမသတ်နိုင်ပါ။ ဇူလိုင်လ 10th, 2021Tranquillus
ဖတ်ရန် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏အခြေခံများ - အန္တရာယ်များ
လွန်ခဲ့သောစုပေါင်းသဘောတူညီချက်များ - သင်သည်မီးဖွားခွင့်တွင် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အားအမျိုးမျိုးသောအပိုဆုကြေးပေးဆောင်ရပါသလား။
အောက်ပါProfessional ကကုန်ကျစရိတ် 2021